प्रहरी माथि यसरी प्रहार हुनु दु:खद हो - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
भ्रष्टाचार र घूसखोरीमा संलग्न कसैले पनि छुट पाउँदैनन्
सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएको ६ महिना भएको छ । यो अवधिमा उनले सांगठनिक सुधार तथा शान्ति–सुरक्षाका पक्षमा केही महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । प्रहरीभित्र लामो समयदेखि रोकिएका बढुवाहरू अघि बढाएका खनालले केन्द्रमा ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल ब्युरो तथा साइबर कन्ट्रोल ब्युरो स्थापना गरेका छन् । यसबीच विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न एवं विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्नमाथि पनि प्रहरीले तीब्रताका साथ कारबाही चलाइरहेको छ । यद्यपि केही समययता समाजमा घटेका सामाजिक अपराधका कतिपय घटनामा प्रहरी संलग्नता र छानबिनलाई लिएर चर्को आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । देशमा बढ्दो बलात्कार, प्रहरीमाथि उठेका प्रश्न, अनुसन्धान आदि विषयमा केन्द्रित रहेर साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिना र भिषा काफ्लेले खनालसँग गरेको कुराकानी :
तथ्यांकअनुसार जम्मा २६ प्रतिशत घटना नचिनिएका अथवा पेसेबर अपराधीबाट भएको छ । बाँकी चिनजानका, साथीभाइ, नातागोताका मानिसहरूबाट सामाजिक अपराध भएको छ । घर, कोठा, स्कुल, साथीकहाँ जाँदा, अभिभावकत्वका क्रममा यस्ता घटनाहरू भएका छन् । जसले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ उसैबाट बलात्कृत हुनुपर्छ भने त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति भएन भन्नु कति न्यायसंगत हुन्छ ? २६ प्रतिशत नचिनेका र पेसेबर अपराधीहरूले घटाएका घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी गस्ती, सुराकी, प्रहरीले सूचना संकलन, जासुसी संयन्त्र प्रयोग आदि गर्ने काम होला, समुदायसँग सहकार्य गर्ने विषयहरू होलान्, जसले घरमा सुरक्षित छु भन्छ त्यही असुरक्षित हुन्छ भने प्रहरी कसरी घरघरमा पुग्न सक्छ ? यसमा पनि कहाँ, के कति भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ । प्रहरीले नचाहिने नै गरिरहेको छ, कमजोरी नै गरिरहेको छ भने भन्नु पनि पर्छ, तर प्रहरीले अपराधीहरूलाई रातारात, दौडँदा–दौडँदै पनि पक्राउ गरेको छ नि । एक घण्टाभित्र, दुई घण्टाभित्र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पोखरामा घटना घटाएर भाग्ने क्रममै आबुखैरेनीबाट पक्राउ गरेको छ । यसरी प्रहरीले रेस्पोन्स गरेका घटना उत्तिकै छन् । प्रहरी नै यस्तो–उस्तो भनेर मनोबल गिराउने खालको धारणाले हामी कसैलाई ठीक गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
कसले के बुझ्यो म त्यता जान्नँ । मैले बुझेको कुरा र मिनी संसद् मानिने दुईवटा संसदीय समितिमा प्रहरीले गरेका कामको प्रशंसा नै भएको छ । त्यहाँ माननीय सांसदज्यूहरूले प्रहरीले गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि आइदिए हुन्थ्यो । बहुमत सांसदले प्रहरीको प्रशंसा गर्नुभएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नु जायज कुरा हो । प्रहरी संगठनको प्रमुखको हैसियतले म त अपराधको कुनै घटना नै नघटोस् भन्ने चाहन्छु, तर मैले सोच्दैमा त्यस्ता घटना नघट्न सम्भव नहोला । हजुरबुवाले नातिनी बलात्कार गर्ने, नातिले हजुरआमा बलात्कार गर्ने, मामा र काकाले बलात्कार गर्ने घटनाहरू घटिरहेका छन् । यस्ता घटनामा हामी सबैले सजग र सतर्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ । संसदीय समितिमा पनि यस्ता कुराहरूमा बहस भयो । यसमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । सचेतनाका लागि काम गर्नुपर्छ । केही अपराधमा गम्भीर सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्ला, कहीँ नैतिक शिक्षा जरुरी होला । स्कुल, कलेज, घर, समाज, सबैतिर नैतिक शिक्षा जरुरी छ ।
प्रहरीले सबै कुरा गरिदियोस् भन्न सम्भव छ ? बुझेको कुरा सबैले लेखिदिनुपर्‍यो । प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र जवाफदेही बनाएर हुन्छ ? समग्रमा बुझिएको कुरा मिडियामा पनि आउन जरुरी छ । मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले पनि जागिर खाएर राम्रो गर्ने हो, म त्यो प्रयास पनि गर्छु । यद्यपि के लाञ्छना लगाएर मात्र सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ ? हाम्रा इमान्दार प्रयासहरू र हामीसँगै समाजमा गएर गर्ने कामहरूका विषयमा नबोलिदिने ? गरेका राम्रा कामहरू छन् भने ती बाहिर नआउने ? हामी राम्रो गर्नकै लागि रातदिन दत्तचित्त छौं । अपराधका केही घटनामा हामीले बाहिरको कुरा गर्‍यौं, अनुभव र तालिमको कुरा गर्‍यौं भने अर्को आलोचना हुन थाल्छ । समृद्ध मुलुकमा पनि घटनाहरू घट्छन्, हामीले त्यो भन्न पाउने कि नपाउने ? त्यसो भन्यो कि यो घटना तैले गरेको भन्ने ? हामी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत प्रहरीले डिफर्म गराइएका देशहरूमा पनि काम गरेर फर्किएका छौं । प्रहरीमाथि आक्रमण भयो भने भोलि देशकै शान्ति–सुरक्षा कमजोर हुन्छ । प्रहरीलाई कमजोर बनाइयो भने अन्य कुराहरू पनि डिसअर्डर हुन्छन् । नेपालमा हामी ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफल छौं । एउटा घटनाकै कारण प्रहरी खत्तम भनिहाल्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? के प्रहरीको मनोबल खस्काउँदा हामी सबैको भलो हुन्छ ? प्रहरीले कुन साधन–स्रोतले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्छ ।